अन्तर्राष्ट्रिय | suryakhabar.com | Page 98
कतारी राजा थानीले यसरी गरे जनहितको आह्वान
on: September 09, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: कतारी राजा थानीले यसरी गरे जनहितको आह्वानNo Comments
दोहा (कतार) । कतारका राजा शेख तामिम बिन हमाद अल थानीले खाडी समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्। कुनै पनि देशको सार्वभौमिकतालाई असर नपार्ने गरी रचनात्मक वार्ता मार्फत् समस्याको समाधान गर्न स...	Read more
क्यारिबियन क्षेत्रमा आएको खतरनाक आँधीबाट १४ को मृत्यु
on: September 08, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
वासिङ्टन । क्यारिबियन क्षेत्रमा आएको इर्मा नामको आँधीबाट कम्तीमा पनि १४ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार प्राप्त समाचारमा १४ को मृत्यु भएको र आँधी आएको प्रभावित क्षेत्रबाट अन्य १० लाख भन्दा बढ...	Read more
बस विसौनीको छाना खस्दा भारतमा नौ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । दक्षिण भारतमा बस विसौनीको छाना बिहीबार खस्दा र कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने घटनामा केयौँ अन्य व्यक्ति फसेको आशङ्का गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । घटनास्थलबाट ११ ज...	Read more
हतियार उन्मादले विश्वव्यापी विनास निम्त्याउन सक्छ : पुटिन
on: September 06, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
जियामेन (चीन) । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियासँंग जोडेर भइरहेको ’सैन्य उन्माद’ ले विश्वव्यापी विनाश निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । चीनमा ब्रिक्स सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीसँ...	Read more
ब्रिक्स सम्मेलनलाई नै यसरी प्रभावित पारिदियो उत्तरकोरियाले !
on: September 05, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
काठमाण्डौ । बढ्दो भुराजनीतिक तनावबीच ब्राजि, रुस् भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समुह ब्रिक्सका नेताहरुको सम्मेलन चीनको सियामेनमा जारी छ । सम्मेलनमा विश्वका तीब्र गतिमा अर्थतन्त्रको विकास गरिर...	Read more
परवेज मुशर्रफ एक्कासि किन फर्किने भए पाकिस्तान ? यस्तो छ कारण
on: September 04, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: परवेज मुशर्रफ एक्कासि किन फर्किने भए पाकिस्तान ? यस्तो छ कारणNo Comments
इश्लामावाद । पाकिस्तानी पूर्व सैनिक शासक प्रवेज मुशर्रफले आफू पूर्व प्रधानमन्त्री बेनेजिर भूट्टोको हत्याबारे लागेको मुद्दाको सामना गर्न पाकिस्तान आउने बताएका छन् ।	Read more
यसरी भयो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ट्रम्पको दोस्रो भ्रमण
on: September 03, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
वासिङटन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाढी प्रभावित क्षेत्र टेक्सासमा शनिबार दोस्रो पटक भ्रमण गरेका छन् । बाढीपीडितलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले श्रीमती मेलानिआ...	Read more
उत्तरकोरियाले हाइड्रोजन बम बनाएको संकेत !
on: September 03, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: उत्तरकोरियाले हाइड्रोजन बम बनाएको संकेत !No Comments
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र मार्फत हान्न सकिने अत्याधुनिक हाइड्रोजन बमको विकास गरेको बताएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमले देशका नेता किम जोङ उनले त्यस्तो हति...	Read more
अमेरिकामा पनि यसरी बढ्दैछ बेरोजगारी !
on: September 02, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: अमेरिकामा पनि यसरी बढ्दैछ बेरोजगारी !No Comments
वासिङ्टन । अमेरिकी रोजगार दरमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा अगस्तमा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अगस्तमा मात्रै एक लाख ५६ हजार अमेरिकीले रोजगारीका थप अवसर पाएका तर यो अघिल्ला बर्षको तुलनामा सन्...	Read more
केन्याको राष्ट्रपतिय निर्वाचनको परिणाम अदालतद्वारा बदर
on: September 02, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
एजेन्सी । केन्यामा गत महिना भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनको नतीजालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गर्दै नयाँ चुनाव ६० दिनभित्र गर्न आदेश दिएको छ। उक्त फैसला अफ्रिकाको इतिहासमै अभूतपूर्व...	Read more
on: September 01, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: टेक्सासमा आँधीबाट ४० को मृत्यु वा हराएको आशङ्काNo Comments
हाउस्टन । टेक्सासमा हालै आएको आँधीबाट कम्तीम पनि ४० जनाको ज्यान गएको वा हराएको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारी बर्षा र त्यसपछि सुरु भएको आँधीबाट ती व्यक्ति मारिएको हुनसक्ने अनुमान गरि...	Read more
अमेरिका र मेक्सिकोबीच पर्खाल लगाउन अब यस्तो तयारी
on: September 01, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: अमेरिका र मेक्सिकोबीच पर्खाल लगाउन अब यस्तो तयारीNo Comments
एजेन्सी । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रपतिले ठूलो प्रचार प्रसार गरेको मेक्सिकोसँगको सीमामा लगाउने भनेको सीमा पर्खालका लागि कंक्रिटको नमूना बनाउन चार कम्पनी चुनिएका छन्। मेक्सिको पर्खाल राष्ट्रपत...	Read more
on: August 31, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
जापानी समुद्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेलगत्तै उत्तरकोरियाले दियो फेरि अर्को संकेत !
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले जापानी भूभाग हुँदै प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र प्रशान्त क्षेत्रमा उसको सैन्य कारबाहीको पहिलो कदम सुरु भएको बताएको छ । केही दिनअघि जापानी समुद्रमा आफ्नो क्षेप्यास्त्र...	Read more
मुम्बईमा निरन्तर भारी बर्षा, बिजुली सट भएर पाँचको मृत्यु !
on: August 30, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
मुम्बई । मुम्बईका विभिन्न भूभागमा भएको अविरल बर्षाका कारण बुधबार पाँच जनाको ज्यान गएको समाचार छ । प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार भारी बर्षाका कारण यहाँका विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ भने यातायातक...	Read more
on: August 29, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले मंगलवार बिहान परीक्षण गरेको एउटा बलेस्टिक क्षेप्यास्त्र पहिलो पटक जापानी आकाश भएर समुद्रमा खसेको छ। जापानको उत्तरी होकाइदो टापुको करिब तीन हजार किलोमिटरसम्म उक्त क्ष...	Read more
अमेरिकाको टेक्सासमा भीषण आँधी, एक हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार
on: August 28, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
एजेन्सी । अमेरिकाको टेक्सासमा हार्भी नामक आँधीपश्चात भएको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीले ह्युस्टन शहरका विभिन्न भाग डुबानमा परेपछि एक हजार भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरिएको छ।	Read more
दोक्लाम विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतीय सेनाप्रखुले दिए नयाँ संकेत !
on: August 27, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
एजेन्सी । भारतीय सेना प्रमुख जनर बिपिन रावतले भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन् । दुई देशबीच दोक्लाम लगायतका सीमा क्षेत्रमा तनवा उत्पन्न भइरहेको बेलामा उनले सो...	Read more
अमेरिकाको टेक्सासमा तुफान, ठूलो बाढी आउने खतरा !
on: August 26, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: अमेरिकाको टेक्सासमा तुफान, ठूलो बाढी आउने खतरा !No Comments
एजेन्सी । अमेरिकाको टेक्सासमा हार्वे नामक तुफान चलिरहेको छ । जसका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । विशेष गरी टेक्सासको तटिय क्षेत्रमा दुई सय १५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको दूरीमा हावा चलिरह...	Read more
धर्मगुरु रहीमको पक्षमा गरिएको प्रदर्शनमा झडप भई मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुग्यो
on: August 26, 2017 In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
भारत । गैर नाफामुलक सामाजिक तथा आध्यात्मिक संस्था डेराका प्रमुख गुरमीत राम रहीमलाई अदालतद्वारा दोषी ठहराएपछि उनका समर्थकद्वारा गरेको प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपपछि झडपमा परी देशका विभिन...	Read more